HTV HTV – Himalaya Television
संसदमा आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री (लाइभ)
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानिकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै समानिकरण, समपुरक र विशेष...
बालुवाटारले पार्टीका नेतालाई भ्रष्टाचारमा फसाउन खोज्योः पन्त
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाउन खोजिएको बताउनुभएको छ । हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले...
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो समयदेखि तिक्ततापुर्ण सम्वन्ध छ । एमाले हुँदादेखि नै चलिरहेको यस्तो सम्वन्ध अहिले पनि कायम छ । पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समुहलाई फकाउने प्रयास गरिरहे पनि...
पार्टीमा भएकाे घेरावन्दीपछि चरम संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब विकल्प साँघुरिँदै गएका छन् । पार्टीमा रस्साकस्सी चलिरहँदा उहाँसँग ५ वटा विकल्प थिए । तर अब ३ वटा मात्र बाँकी देखिन्छन् । उहाँका सामु के-के विकल्प थिए...
बसन्तुपर क्षेत्रबाट कम्तीमा १० जना पक्राउ
काठमाडौं । इन्द्रजात्रा हेर्न बसन्तुपर क्षेत्र पुगेका कम्तीमा १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी विजयराज भट्ट पनि रहेको खुलेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाका एक जना मेजर, एक जना सेवा निवृत्त कर्णेल र...
नेकपा र सीसीपीबीच सहयोग आदानप्रदान सहमतिमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) बीच सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेकपा र सीपीसीका नेताहहरुबीच काठमाडौंमा जारी विचार आदान प्रदान कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहयोग तथा भाइचारा सम्बन्ध...
काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको अध्यक्षमा फेरि पनि जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । आज भएको चुनावमा श्रेष्ठले अर्का प्रतिस्पर्धी उमेशलाल श्रेष्ठलाई ७ मतले पछि पारेका हुन् । जीवनरामले १७ मत पाए भने उमेशलालले १० मत मात्र पाए...
आज देशभर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा सन् दुई हजारबाट यो दिवस विश्वभर मनाउन शुरु गरिएको हो। प्राथमिक उपचारको ज्ञान भएमा घाईतेहरुलाई हुन सक्ने जीवन जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका...
सुरु भयो पितृपक्ष अर्थात सोह्रश्राद्ध
काठमाडौं । हिन्दू परम्परा अनुसार आजदेखि पितृपक्ष अर्थात् सोह्रश्राद्ध सुरु भएको छ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म कायम रहने पितृपक्षमा आफ्ना दिवङ्गत पितृको तिथिमा तर्पण, सिदादान तथा पिण्डदान गरिन्छ । सोह्र वटा तिथिमा पितृप्रति श्रद्धासाथ पितृकार्य गरिने...
विदेश नीतिमा नेपाल कतैतिर पनि ढल्केको छैन : डा. रुपक सापकोटा